Alahady 11 Oktobra 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady ivom-bokatry ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny
Alahady 11 Oktobra 2020. Alahady ankalazaina ny ivombokatry ny sampana tanora kristiana. Alahady hitondrana ambavaka ihany koa ny SP Andrefana noho ny faha 25 taonany. Mbola mibanjina hatrany ny lohahevitra « Mirosoa amin’ny finoana Masina » isika. Nitarika ny fotoana anio ny Rtoa Fy Rakotomalala, mpiomana ho mpitandrina. Ny nanao ny vavaka sy ny vakiteny dia ireo mpikambana ao amin’ny STK avokoa, Rtoakely Razafindrakoto Mikanto, Andriamampianina Faneva, Andriamampianina Tsanta. Ny nitondra ny hafatra kosa dia ny mpiomana ho mpitandrina Ramilison Diamondra.
Nitendry orgue: RAJAOFETRA John